- Hablaha Media Network
HMN:- Daraasaad lagu sameeyay hablaha u weyn qeybta dabe ayaa waxaa lagu ogaaday in hawenka noocaasi ah aysan badanaa si buuxda u gaarin giriirka galmada.
Daraasad ayaa waxaa lagu sameeyay haween kor udhaafaya 450 oo ah kuwa gadaal u weyn. waxayna badanaa xuseen marka ay la bashaalayaan nimanooda in aysan sifiican u gaarin dareenka raaxada ah.
Daraasad ayaa wxaa sameeyay Jaamacad Ku Taal wadan Koofur Africa, waxa ayna ugu gol laahaayeen Ragga African ka ah oo sifiican u daneeya hablaha dabada waaweeyn leh, iyo in ay haweenka noocaasi ah helaan Dharagda Galmada.
Sida ay ku warantay Miokua oo ah haweeneey si aad ah ugu weyn miskaha iyo ka mid kuwa daraasad lagu sameeyay ayaa waxa ay sheegtay in aysan si fiican u dareemin raaxada ay dareemaan hablaha kale ee miskaha yaryar.
Ragga Soomaaliyeed qaar ka mid ah ayaa waxa ay si faacan u jecel yihiin hablaha nocaan oo kale ah iyo sheegaya insan wax raaxo leheyn naaga slmka ah ee aad u yar yar.